Uphengululo lweAlbhamu: IGorillaz Soundtrack yeTrump Apocalypse kwi 'Humanz' - Ukuzonwabisa
Eyona Ukuzonwabisa Isandi seGorillaz isandi seTrumpocalypse kwi 'Humanz'
IGorillaz eSaturnz Barz.Youtube
Xa seva ukugquma kwealbhamu entsha yeGorillaz kunyaka ophelileyo sacinga ukuba siyayazi into emasiyilindele. Sasingazi ukuba asifumani nje icwecwe elitsha-sifumene iGorillaz entsha ngokupheleleyo.
Uncedwa yi-Blur frontman uDamon Albarn, elona bhanti liphumeleleyo kwihlabathi sele likhanyisile malunga neshumi leminyaka ngoku. Igcisa elinqabileyo lokwenza ii-rap / i-alt-rock rock ezibambeleyo, iminyaka eyakhayo ka-Gorillaz yachazwa ziingoma eziphambili kwii-albhamu zazo zokuqala, uClint Eastwood kunye no-Feel Good Inc. (ngo-2010 Ulwandle lweplastikhi Ndandibahle kakhulu.) Ke nini Ukuthobeka yabhengezwa, kwacaca ukuba Iintsuku zeedemon Iqela labasebenzi belininzi elinokuphila ngalo.
Ukuthobeka ifike kwiveki ephelileyo emva kweminyaka emithandathu, kodwa ngaphambi kokuba siwuva umculo kwakucacile ukuba oku kungaphezulu kokukhutshwa kwe-albhamu-oku kukumiliselwa kwegama elitsha.
Uninzi lwento olunento yokwenza nomjikelo wokunyusa amabhanti. Okokuqala, ividiyo yeVR 360 yomculo kaSaturnz Barz yaqala inguquko yeGorillaz ukusuka kwi-2-D ukuya kwi-3-D. Kwakukho namava kaSonos. Kwaye ngoku kukho umboniso weTV weGorillaz kuphuhliso. Oku kukhangeleka ngathi; kunjalo impumelelo ye Ukuthobeka iya kugqiba ukuba ngaba uphawu lunesibheno esihlala sihleli kwintengiso.
Kodwa fuck yonke loo nto (okwangoku). Ukuthobeka unelizwi elahlukileyo, ingqikelelo, kunye noluhlu lweetrekhi ezigcwele iindwendwe ezinganeli nje kuphela kukuphazamisa amava onke; yomeleza ibali elineengxabano Ukuthobeka uzama ukuxelela.
Xa u-Albarn kunye nomculi uJamie Hewlett babedala Ukuthobeka , Babuza abo banegalelo kwiindwendwe zabo ukuba bacinge ilizwe apho uTrump ephumelele unyulo. Jonga apho sikhona ngoku: i-apocalypse eyoyikisayo, kwaye olu luluhlu lwethu lokudlala. Ukuthobeka liqela elonwabisayo ekupheleni kwehlabathi.
Uninzi lokudlalwayo kunoluhlu lwengoma yesiko, Ukuthobeka ihambisa ngakumbi kwisithembiso sikaDrake Ngakumbi uBomi kunokuba uDrizzy wayelindele. Kukho i-cavalcade yeempembelelo ezahlukeneyo kunye nezimo zengqondo Ukuthobeka , Kodwa uninzi lwazo luza ngoncedo lwabazobi ababonisa iingoma, njengoko uAlbarn noHewitt besebenza njengomjelo wobuntu ukuba bahlale kunye, bephosa ukungena kumxube zonke iingoma ezimbalwa.
Iqala njani ke i-apocalypse? Ngabadlali beklabhu, ewe. UVince Staples uyakhaba Ukuthobeka ukucima kwaye kwangoko usisungulele kwi-orbit: Isibhakabhaka esiwa 'usana, yilahle iesile' phambi kokuwa kwayo ngumxholo we-Ascension, umhobe webhayibhile ovulekileyo. Kungekudala siyaphola ngeJamaican Popcaan kwiSaturnz Barz, umkhondo wokuhamba ngomgibe kunye nombulali ozinciphisayo ovela eAlbarn. Nkqu noMomentz yijam eqinisekisiweyo, ngaphandle komdlalo ohlekisayo kuhlobo olo. Kodwa ngaba ngokwenene ubulindele nantoni na engathandekiyo kuDe La Soul?
Ke, kanye xa ucinga ukuba ubenexesha elimnandi, uGorillaz wakubetha nge-somber yinyani ngokuzenzisa kwe-chill-wave, indie-rock ephefumlelweyo i-Andromeda kunye necala layo le-B, i-ballad edandathekileyo iBusted neBlue.
I-Andromeda yenye yezona ndawo ziqina kakhulu kwi-albhamu, ngaphandle kwento engasetyenziswanga kakuhle ne-DDRAM (evunywa ngu-Albarn yayikukuchukumisa nje intombi yakhe), ngelixa u-Busted noBlue sisikhumbuzo esothusayo phakathi Ukuthobeka Umsindo uvulekile.
Isiphelo sokomoya sisishiya somelele kwaye sinethemba ngomso emva kokutshatyalaliswa kwesizwe. UBenjamin Clementine ubalasele kwiMali kaHaleluya. Umnxeba kwivangeli awufani kwiChance yamva nje iRappa kwaye Nangona kuza iirekhodi, iingcambu ezinzulu zikaClementine zithatha ingoma ziyise kwindawo entle, yoqobo, apho siva u-Albarn ecula, Xa kufika kusasa sisengabantu.
SinaMandla siyayiqinisa le mbono ngelitye nje elaneleyo lokwenza Blur kunye neBlo Party abalandeli bayancwina.
Kukho ubutyebi obuninzi Ukuthobeka ukuba ubaleka ube mnye kwimicimbi emibini ekuphulaphuleni, kuxhomekeke kwindlela oyisebenzisa ngayo umculo wakho. Ngesinye isihlandlo, unokuba ne-albhamu enkulu ehambisa iingcamango zayo (l) s, kodwa iqulethe ukutshitshiswa kweendlela ezincinci (Itshaja kunye nePhathi yokuBulala ngesondo ukubiza ezo zibini ngokukhawuleza zilibaleke).
Elinye ityala le Ukuthobeka Kungenxa yokuba uya kuba nakho ukushukuma ngoluhlu lokudlala oluguquguqukayo nolunamandla, kodwa ungenelelo lwenza ukuba amava afanelekileyo. Ivakala ngathi irekhodi elifuna ukudlalwa ngendlela ethile, kodwa xa lisuswe kuloo mfuno Ukuthobeka ihlengahlengisa ngakumbi, inika into encinci kulo lonke uhlobo lwe fan yeGorillaz.
Ukuthobeka ipolitiki ngumxholo wayo. Isithokothoko, ingcinga ye-IDGAF, intloko ejikeleze ngabom ejolise kugqithiso lwengqondo, konke kuyinxalenye yendawo yesihogo.
Unxibe imibala eqaqambileyo kunye neendlela zomculo wepop, Ukuthobeka yinto eyenzekayo ukuba iMelika iphose konke ukulumkisa emoyeni. Sisiphumo soluntu lweemvumi eziza kunye ngexesha apho intsebenziswano kunye nencoko iyimfuneko engathethekiyo.
Ukuthobeka Inomtsalane ngokwaneleyo njenge-albhamu ebambe imeko kwaye ikhuthaze uphawu ukuze ibone ikamva apho indibano yeGorillaz ithatha umhlaba wonke ngokwenyani. Nokuba le nyaniso iyenye inomdla ngokwaneleyo ukuba inwenwe ngaphaya komgangatho womculo okwangoku ayizukubonwa. Kodwa okwangoku, ngaphandle kwendlela ebonisa ukuba oku kukuhamba kwekhondo lomsebenzi, yonwabele umculo. Akuthandabuzeki ukuba umboniso weTV uya kuhlala ulungile.
Abahlobo Abakhulu Ngonaphakade: Idrama kaKate Mara yeNtombazana kunye neNja 'Megan Leavey' Ukulunywa
UCandice Swanepoel Uyahamba kude neNdlu yakhe yeMpuma yeLali
U-Chuck Schumer uhlawulelwe i-157,000 yeedola kwiPropathi yakhe yePaki
Ndiyifumana njani inombolo yefowuni yasimahla
UJean Michel Basquiat ongenasihloko ngo-1981
uphume kowuphi unyaka rambo
panic kwi-disco msg
Melissa mccarthy ubomi beqela